Patient information in somali – Strokestop
Patient information in somali
Wakhti xaadirkan waxa Gobolka Stockholm ka socota daraasad cilmiyaysan taas oo ku socota in la darso haddii baaritaan lagu helayo wadne garaaca aan joogtada ahayn dhanka dadka ah 75-76 sanno ay yarayn karto khatarta dhiig maskaxda ku furma iyadoo loo marayo baaritaan iyo daryeel wata dawooyinka dhiiga khafiifiya. Daraasadan waxa kale oo ay baaraysaa ilaa heerka bukaan socotada hore u lahaa wadne garaac aan joogto ahayn ay u heleen daweynta dhiig khafiifinta. Tani ayaa sabab u ah inaad heshay warbixintan iyo weydiisashadan. Daraasadan waxa socodsiinaya KTA Prim, isbitaal jamicadeedka Karolinska.
Sababtee loo samaynayaa mashruucan cilmi-baarista?
Wadne garaaca aan joogtada ahayn waa khal-khalka ugu caadisan ee dhaq-dhaqaaqa wadnaha oo jiritaankani wuxu la sii korodhaa da’da oo sii weynaata. Xaaladani waxay keentaa dhaq-dhaqaaq wadne oo aan joogoto ahayn oo calaamaduhu si xoog leh ayay u kala duwanyihiin, xaaladaha qaarkood wuxu qofku yeelan karaa wadne garaac aan joogto ahayn oo bilaa calaamad ah gebi ahaanba. Sidaas darted waxaa qiime yeelan karta in la isku dayo in baaritaan lagu helo wadne garaacyada aan joogtada ahayn ee aan la helin. Waxa kale oo aanu baari doonaa haddii qaababka kale ee aan ahayn EKG ay caawin karaan in la helo wadne garaac aan joogto ahayn.
Arrintani waxaanu u samayn doonaa dhiig ka qaadista laabka gacantaada si loo baaro maado ku jirta dhiiga taas oo tiradeedu kor u kacdo haddii qofku leeyahay wadne garaac aan joogto ahayn ama haddii wadnaha culays saaranyahay. Jawaabta baaritaanka dhiigan ayaa go’aamin doonta nooca baaritaan ee la samaynayo. Waxa kale oo aanu darsaynaa dhowr qaababka EKG la qaadi karo ah oo kala duwan xilliga daraasadan. Ugu dambeynti waxa kale oo aanu doonaynaa inaanu ogaano haddii qaabkani yahay mid wax ku ool ah kharash ahaan iyo waxa raad ku yeesha ka qayb-qaadashada baaritaankan.
Markay jiru wadne garaac aan joogto ahayn waxa jirta khatar korodshan in loo dhibaatoodo maskax dhiigid (dhiig maskaxda ku furma), tani waxay ku xirantahay xinjir dhiig ah oo ku samaysmata labada dhinac ee wadnaha. Khatarta dhiig maskaxda ku furma waxa la yarayn karaa boqolkiiba 60-70% marka lagu daryeelo dawada dhiiga khafiifisa. Daryeelka dhiig khafiifinta waxa kale oo ay wadataa khatarta korodhka in loo dhibaatoodo dhiigid khatar ah.
Daraasadan waxa ansaxiyay guddida eegida anshaxa ee gobolka kuna taala Stockholm.
Maxay minco aniga ii leedahay in aan ka qayb-qaato daraasadan?
Haddii aad aqbasho inaad ka qayb-qaadato daraasadan waxaad ugu horeyn ka jawaabi doontoaa dhowr su’aalood oo ku saabsan caafimaadkaaga oo waxa la diiwan gelinayaa cabirayaa wadne garaacaaga. Intaasi ka dib waxa lagaa qaadayaa shan baaritaan oo dhiig iyo diiwan gelinta EKG wadatana waxa lagu magacaabo EKG suulka ah. Haddii jawaabta baaritaankan tahay caadi iyo haddii EKG muujiyo garaac caadi ah ma la samaynayo baaritaan dheeraad ah. Afar ka mid ah shanta baaritaan ee dhiig waxa lagu kaydiyaa waxa lagu magacaabo kaydka bayoolajiga, eeg hoos.
Haddii jawaabta dhiigu ay sareyso oo EKG muujiyay garaac caadi ah waxa lagugu casuumi doonaa diiwaan gelin EKG suulka ah oo dheeraad ah oo ka dhacda guriga wadatana qalabka EKG ee marba meel la dhigi karo si la isagu dayo caddaynta dhacdooyin kooban oo ah wadne garaac aan joogto ahayn. Diiwan gelintan waxay dhacdaa ugu yaraan 2 goor maalintii muddo 30 ilbiriqsi oo socota 2 toddobaad iyadoo suulasha lagu cadaadinayo EKG duube kaas oo la amaahdo xilliga ka qayb-qaadashadan.
Haddii ay muuqato inaad leedahay wadne garaac aan joogto ahayn waxa lagugu casuumi doonaa booqasho dhakhtar si mawqif looga gaaro dawada dhiig khafiifinta.
Haddii tirade dhiigaaga ee baaritaanka dhiig ay xoog u sareyso waxa lagugu casuumi doonaa baaritaan dheeraad ah shaqada wadnaha taas oo wadata ultra-juud wuxu doonaba ha muujiyo EKG.
Adigu waxa kale oo aad ka tirsanaan doontaa la socod wakhti dheer ah muddo 5 sanno ah taas oo diiwaanka maamulka arrimaha bulshada la darsi doono. Tani waa si loola socdo waxyaabo ay ka mid tahay jiritaanka u xanuusadka dhiig maskaxda ku furma iyo qoritaanka dawooyinka ka hortaga xinjir dhiiga La socodkani uma baahna ka qayb-qaadasho fir-fircoon oo dhinacaaga ah. Dhiiga baaritaanada waxa xitaa lagu kaydin doonaa si mustaqbalka loo darsi karo maadooyinka cusub ee naga caawin kara in si sahlan loo caddeeyo wadne garaaca aan joogtada ahayn. Sida baaritaankaaga loo maareyn doono waxay ku sharaxantahay hoosta cinwaanka kaydka bayoolajiga.
Lacag bixinta safarada daraasadan ma la bixiyo. Kharashka wixi daryeel dawo ah ee iman kara ka dib ka qayb-qaadashadaada waxa daboolaysa faa’iidooyinka dawo ee caadiga ah.
Waa kuwee dareenada aan fiicnayn/khataraha ee ay keento daraasadani?
Wadne garaaca aan joogtada ahayn iyo daweynta dhiig khafiifinta labaduba waxay keenaan in qofku uu u nugulyahay noocyo khatar ah, laakiin yaraynta khatarta ee ay keento daweynta dhiig khafiifinta ayaa xaaladaha badankooda si dheeraad ah uga weyn marka la barbardhigo khatarta daweyntani leedahay. Daweyntan waxa kale oo ku talinaysa maamulka arrimaha bulshada jiheyteeda qaran ee ugu dambeysay ee ku aadan daryeelka bukaanka wadanaha.-
Baaritaanada ku jira daraasadan ma laha waxyaabo khatar ah sida ku cad qiimeyntayada.
Faa’iidooyin noocee ah ayaa daraasadani ii leedahay aniga?
Ka qayb-qaadashadaadu waxay keentaa fursada ah in la helo oo la daweeyo xaalad si xoog ah oo korodhsan u keenta dhiig maskaxda ku furma, waxa intaasi dheer in daraasadani ay na siin karto aqoon qiimo badan taas oo xitaa dad kale faa’iido u leh mustaqbalka.
Sidee loo ururiyaa macluumaadka shakhsiga ah iyo sidee loo maareeyaa sharciga xog qarinta? Dhakhtara mas’uulka ka ah daraasada iyo kooxda cilmi-baarista(eeg macluumaadka xiriirka ee hoos) waxay ururin doonaan oo diiwan gelinayaan macluumaadka shakshiga ah ee kugu saabsan iyadoo ujeedadu tahay in la qiimeeyo natiijada daraasadan cilmi-baarista ah. Macluumaadkan waxaa ka mid ah: magic, tobanka lambar, macluumaadka cinwaanka, macluumaadka arrimaha khatarta u ah samaysadka xinjirta dhiiga iyo diiwaanka EKG suulka iyo baaritaanka EKG suulka iyo qaybaha kale ee khuseeya diiwaankaaga bukaan socodka. Macluumaadka shakhsiga ee ka yimi daraasadan waxa lagu kaydin iyo daryeeli doonaa nidaamka kombiyuutarka. Macluumaadkaaga waxa ilaalinaya sharciga qarsoodiga oo cid aan shaqo ku lahayn ma heli karaan nidaamkan.
Adigu waxaad xaq u leedahay in qoraal ahaan aad ku codsato inaad ogaato nooca macluumaadka diiwaan gashan ee kugu saabsan. Daabacad noocan ah waxaad adigu xaq u leedahay inaad hesho hal mar sannadkiiba iyadoo bilaa kharash ah. Haddii ay soo baxdo inay ku qorantahay wax khalad ah oo kugu saabsan waa in macluumaadkan khaladka ah la badelo. Haddii aad doonaysid daabacaad la xiriir dhakhtarka mas’uulka ah (eeg hoos).
Macluumaadkan waxa keliya ee heli doona shaqaalaha fulinaya daraasadan oo ma loo isticmaali doono ujeedooyin kale. Adigu waxaad xaq u leedahay inaad codsato macluumaadka ka tirsan maareynta macluumaadkan shakhsiga ah sida ku cad sharciga macluumaadka shakhsiga ah (PuL) §26 oo tani waxaad samaynaysaa iyadoo aad u qorayso Wakiilka Macluumaadka Shakhsiga ah, Sissi Myllyniemi, Qaybta guriga dawlada iyo Deegaanka, Norrbacka S3:01, Solna, 171 76 Stockholm
Baaritaanadaada dhiig waxa lagu kaydin doonaa kaydka bayoolajiga iyagoo leh lambarka 914 oo waxa loo maareyn doonaa si waafaqsan Sharciga kaydka bayoolajiga ee daryeelka caafimaadka iyo bukaanka (2002:297) kaas oo nidaamiya nooca qaabka baaritaanka la oggolyahay in loo kaydiyo oo looga faa’iidaysto. Baaritaankan waxa loo kaydin doonaa isagoo lambar sir ah wata taas oo micnaheedu tahay in baaritaankan aan si toos ah loogu raad-raaci karin adiga qof ahaan.
Dhinaca mashruucan cilmi-baarista waxa la samayn karaa baaritaano kala duwan oo la xiriira wadne garaaca aan joogtada ahayn iyo khatarta korodhsan ee dhinaca dhiig maskaxda ku furma. Baaritaankaaga waxa si loo shay-baaro loo diri karaa shay-baaryadayada Iswiidhan ama shay-baarka shuraakada wada-shaqaynta ee gudaha EU-da. Baaritaanka waxa la kaydin karaa muddo kala duwan inta la sugayo caddayn.
Qofkee helaya baaritaanada iyo macluumaadka?
Cilmi-baarayaasha oo keliya ayaa helaya daraasadan iyadoo macluumaadka loo raad raaci karo adiga qof ahaan markaasi laga saaray. Mashruucan waxa hubiyay oo ansaxiyay guddida anshaxa.
Natiijada waxa lagu daabici doonaa joornaalada cilmi-sayniska ah oo waxa la soo bandhigi doonaa xilliga shirarka cilmi-sayniska. Tirakoobka oo keliya ayaa la soo bandhigi doonaa oo qof gaar ah ma lagu aqoonsan karo.
Tabbaruc ah iyo haddii aad is baddesho adigu
Ka qayb-qaadashadaadu waa tabbaruc oo adigiu xilli kasta oo aad doonto ayaad joojin kartaa ka qayb-qaadashadaada iyadoo aanad u baahnayn inaad sharaxdo sababta. Haddii aad doorato inaad joojisid ka qayb-qaadashadaada daraasadan markaasi arrintani sinnaba raad ma ugu yeelan doonto daryeelkaaga mustaqbalka.
Haddii aad doonaysid joojinta ka qayb-qaadashadaada: Haddii aad doonaysid joojinta ka qayb-qaadashadaada la xiriir kalkaalisada caafimaad ee mas’uulka ka ah ama dhakhtarka mas’uulka ka ah (eeg macluumaadka xiriirka ee hoos).
Macluumaadka la ururiyay: Waxa muhiim ah in la caddeyo in dhakhtarka mas’uulka ka ah daraasada uu xaq u leeyahay haynta macluumaadka la uririyay ka hor joojinta daraasad iyo in ay sii socon doonto in macluumaadkaas ay ahaanayaan qayb ka mid ah daraasadan.
Haddii aad isku qoomamayso inaad bixisay oggolaanshaha in aanu isticmaalno baaritaankaaga waxaad xaq u leedahay in baaritaankaaga la tuuro.
Haddii aad doonaysid warbixin dheeraad ah oo ku saabsan daraasadan, xuquuqdaada bukaan socod ahaan ama haddii dhibaato timaado xilliga daraasadan waa inaad la xiriirto:
Kalkaalisooyinka caafimaad ee cilmi-baarista ee jooga KTA Prim 08-517 782 02
Dhakhtarka mas’uulka ka ah daraasadan:
Mårten Rosenqvist, Dhakhtar sare/Barafasoor